Mampiseho Fanitsakitsahana Zon’olombelona Any Sahara Andrefana Ireo Mpanatontosa Horonantsary Fanadihadiana Na Dia Eo Aza Ny Fandrahonan’ny Sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2018 18:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, English, Ελληνικά, русский, عربي, Français, Italiano, English
Nalefa voalohany tao amin'ny Fetiben'ny Horonantsary Fanadihadiana DOK Leipzig tany Alemaina tamin'ny volana Novambra lasa teo ity horonantsary mitondra ny lohateny hoe 3 Stolen Cameras (Ny Fankantsary 3 Nangalarina) ity na dia teo aza ny fandrahonana tamin'ny sivana sy ny olana ara-bola.
Ilay horonantsary fohy maharitra 17 minitra izay novokarin'ny vondrona fampahalalam-baovao any Sahara Andrefana Equipe Media sy ny famokarana sarimihetsika iombonana any Soeda RåFilm, dia sady nataon'ny Equipe Media no momba azy ihany koa. Mampiseho ny sary nalain'ny Equipe Media tany Sahara Andrefana nanomboka tamin'ny taona 2009 izany, saingy navoaka sy novokarina tany Soeda.
Nanomboka tamin'ny taona 1975 ny ady tany Sahara Andrefana rehefa nisintaka ny faritra vitsy mponina ny mpanjanaka teo aloha avy any Espaina ary nanambatra hery ireo firenena manodidina avy ao Maoritania sy Maraoka mba hamehezana ny faritra. Raha niala an'i Sahara Andrefana ny Maoritaniana taty aoriana, dia mbola nifehy ilay antsoina indraindray hoe ” ilay faritr'i Afrika nozanahana farany’ ny tafika Maraokana . Nandritra ny 16 taona, niady ny fahaleovantena tamin'i Maraoka ny vondrona mpikomy fantatra amin'ny anarana hoe Polisario Front, talohan'ny nanambaran'ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 1991 ny fampitsaharana ny ady. Nankatoavin'ny ONU ny Polisario Front ho solontena ara-dalanan'ny vahoaka Sahrawi, vondrom-poko mifangaro mipetraka any amin'ny faritra andrefan'i Sahara sy Maoritania.
3 Stolen Cameras – Horonantsary fampahafantarana fohy avy amin'ny RåFILM tao amin'ny Vimeo.
Nifandray tamin'ny alàlan'ny tambajotra-piraisankina tao an-toerana niaraka tamin'ny Sahara Andrefana ny ekipan'ny RåFilm sy Equipe Media taona vitsy lasa izay. Fotoana fohy taorian'ny namoahana ny horonantsary fanadihadiana Palestiniana 5 Broken Cameras (Ny fakantsary 5 potika), izay nahazo ny Oscars tamin'ny taona 2013, no nipoiran'ny hevitra momba ny 3 Stolen Cameras.
Kelikely taorian'izany, nanambara ny fetibe fa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny mpanivana Libaney ny 3 Stolen Cameras roa andro mialoha ny fandefasana ny horonantsary ary hofoanana noho izany. Tsy avy tamin'ny ekipan'ny fetibe akory no namantaran'ireo mpanatontosa horonantsary ity vaovao ity, fa tamin'ny alalàn'ity fanambarana manaraka ity tao amin'ny tranonkalan'ny BIFF:
Nofaritan'ny tranonkalam-baovao ao an-toerana le360.com ho “manimba” ny fitakian'i Maraoka any Sahara Andrefana ilay sarimihetsika ary nanamafy ity tranonkalam-baovao ity fa namboarimboarina sy novokarina tany Alzeria (izay manohana ny Polisario Front ) ilay sarimihetsika. Tsy niresaka momba ny Equipe Media sy ny RåFilm ilay lahatsoratra.
Vao mainka hampitombo ny fahalianan'ny vahoaka momba ity horonantsary ity ny fanasivanana ilay horonantsary tao Libanona. Fotoana fohy taorian'ny zava-nitranga tao amin'ny BIFF, nanasonia ny fanangonan-tsonia ho fanoherana ny fanasivanana ny 3 Stolen Cameras ny fetiben'ny sarimihetsika iraisam-pirenena miisa 20.